Kooxda Liverpool oo qarka u saaran inay qandaraaska u kordhiso labo ka mid ah xiddigaheeda muhiimka ah – Gool FM
Kooxda Liverpool oo qarka u saaran inay qandaraaska u kordhiso labo ka mid ah xiddigaheeda muhiimka ah
Haaruun May 19, 2021
(Liverpool) 19 Maajo 2021. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa qarka u saaran inay wadahadallo heshiis kordhin ah la furto Goolhayaheeda Alisson Becker iyo laacibkeeda khadka dhexe ee Fabinho xagaagan.
Goolhayaha reer Brazil ayaa xilli ciyaareed adag qaatay fasal ciyaareedkan, laakiin waxa uu ahaa geesiga kulankii ay booqdeen dhowaan Kooxda West Bromwich Albion kaddib markii uu Madax ugu shubay dhammaadkii ciyaarta, taasoo saddexda dhibcood siiday Reds, siina nooleysay rajadoodii ka soo qeyb-galkooda Champions League ee kal ciyaareedka soo socda.
Sida ay warinayso Jariiradda Daily Mirror, Kooxda Tababare Jurgen Klopp ayaa eegeysa inay qandaraasyo waqti dheer ah ka saxiixato ka hor bilowga soo socda labadeeda laacib ee Alisson iyo Fabinho.
Alisson ayaa qandaraaskiisa haatan waxaa kaga harsan labo sanadood ah, waxaana Liverpool ay dooq u haysataa inay ku kordhiso heshiiskiisa sanad kale oo dheeri ah, laakii kooxda ayaa doonaysa inay heshiis cusub oo waqti dheer ah ku abaal-mariso Goolhayahan.
Dhinaca kale Fabinho ayaa sidoo kale galaya labadiisa sano ee ugu dambeysa heshiiskiisa, iyadoo Reds ay qorsheynayso inay heshiiska u ballaariso 27-sano jirkaan, maadaama uu xiddigan boosas badan kaga ciyaari karo kooxda ka arrimisa garoonka Anfield.
Allison ayaa Liverpool u saftay 128 kulan tan iyo markii uu kaga soo biiray Kooxda Roma bishii July ee sanadkii 2018, isagoo shabaqiisa gool ka ilaashaday 57 kulan, halka Fabinho uu u saftay Reds 120 kulan tan iyo markii ay kala soo saxiixdeen Monaco bishii May ee isla sanadkaas.
Xavi Hernández oo hoos u dhigay dalabyo uu ka helay Xulka Brazil iyo Kooxda Borussia Dortmund... (Miyey sababtu tahay Barcelona?)
RASMI: Muller iyo Hummels oo ku soo laabtay liiska xiddigaha xulka qaranka Jarmalka ugu qeyb galaya koobka qarammada Yurub